Halatra herinaratra : mitohy ny fitsirihana ataon’ny Jirama | JIRAMA
Halatra herinaratra : mitohy ny fitsirihana ataon’ny Jirama
Mitohy hatrany ny fitsirihan’ny JIRAMA ireo ahiahiana ho halatra herinaratra manerana ny nosy. Anisan’ny vaindohan-draharahan’ny fanjakana ankehitriny ny fanarenana ity orinasam-panjakana ity ka tafiditra anatin’izany ny fanenjehana ireo mpangalatra herinaratra. Tsy hilefitra amin’ireo izay mampilatsaka an-katerana ity orinasam-panjakana ity ny mpitantana ny JIRAMA sy ny fitondram-panjakana.
Ohatra iray amin’izany ny halatra herinaratra tao amin’ny fitotoam-bary iray any Moramanga. Rehefa natao ny fitsirihana ilay kaontera dia hita fa nandritra ny 42 volana no nangalatra herinaratra ilay tompony. Araka ny kajin’ny sandan’ny herinaratra sy ny fitaovana nampiasainy dia manodidina ny 94 tapitrisa Ariary ny vola tokony hoefainy amin’ny JIRAMA.
Raha tsiahivina, nandritry ny taona 2019 dia mpanjifa 2303 manerana ireo faritra misy ny JIRAMA no nanaovana fitsirihana ka 773 ny karazana tsy fanarahan-dalàna hita. Mahatratra 791 781 663 Ariary ny vola tokony hiverina amin’ny JIRAMA ny taona 2019.